के हुँदै छ मोर्चासँगको वार्ता ? – ToplineKhabar
के हुँदै छ मोर्चासँगको वार्ता ?
October 29, 2016 नरेस तिवारी0Comment
काठमाडौं – संविधान संशोधनबारे सरकार, मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच केही दिनभित्रै औपचारिक वार्ता हुने भएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने गरी औपचारिक छलफल हुन लागेको हो ।
‘एक–दुई दिनभित्रै औपचारिक छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ, सायद अब गम्भीर छलफल होला,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार केही निश्चित बुँदामा सरकारसँग अनौपचारिक रूपमा पटकपटक छलफल भएका छन् ।
छिट्टै वार्ता गर्ने प्रचण्ड र देउवाबीच सहमति
दुई नेताबीच मधेसी मोर्चासँग पनि केही दिनभित्रै वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । देउवा भारत भ्रमणमा जानुअघि मोर्चासँग छलफल गर्ने तयारी छ । देउवा १९ कात्तिकमा भारत भ्रमणमा जादै छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
← मोदी आउँदा दुई दिन विदा भएको किन बिर्सिदैछन् एमाले भक्तहरुले ?
दौरासुरुवाल लगाउने बढे, सिलाउने बढेनन् →
November 21, 2016 नरेस तिवारी 0
यी सांसद जो लगातार १० देखि ३१ संसद् बैठकमा गएनन्:
स्ववियु निर्वाचन अधिकारीको अपहरण : अनेरास्ववियु र नेविसंघ चुनाव सार्ने प्रयासमा